तरकारीमा विषादी हुदैन भनेर सत् प्रतिशत विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
तरकारीमा विषादी हुदैन भनेर सत् प्रतिशत विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन
२०७७ फाल्गुन ४, मंगलवार १०:५८:००
काठमाडाै‌ । लामो समय कोरिया लगायत विभिन्न देशहरुमा खाद्य तथा तरकारीमा हुने मिसावट र फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोगहुने मिसावट र विषादीको प्रयोगले आममानिसलाई पार्ने असरको बारेमा लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छन्। यिनै जितु उपाध्याय डा. सँग वर्णन मिडियाले गरेको छोटोकुराकानी ।
तरकारीमा विषादीको प्रयोगको बारेमा बेलाबेलामा चर्चा भइरहन्छ, विषादीको प्रयोग कसरी हुन्छ र किन गरिन्छ ?
किसानहरुले तरकारीमा विषादीको प्रयोग दुई कारणले प्रयोग गर्दछन्, पहिलो, तरकारीमा लाग्ने किरा फट्याङ्रा बाट बचाउनका लागि। दोस्रो, लामोसमयम सम्म तरकारी वा फलफूल टिकाउनका लागि पनि किसानले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। अब मुख्य प्रश्न भनेको तरकारीमा किसानले कति र कस्तो विषादीको प्रयोग गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। त्यसमा उपभोत्ताले ध्यान दिन जरुरी छ।
तरकारीमा प्रयोग गर्ने विषादीको मात्रा कति देखि कति सम्म हुन्छ, जसले चाहि मान्छेको शरिरलाई हानी गर्दछ ?
किसानले प्रयोग गर्ने विषादी विभिन्न किसिमका हुन्छ जस्तो किटनास औषधी भुसूना मार्ने औषधी लगायतका थुप्रै हुन्छन्। अब त्यसको मात्र कति हो भन्ने मात्र हो जस्तो, खान योग्य भनेको ० देखि ३५ सम्मको क्याटोगोरिमा रहेका विषादी मानिसको स्वास्थलाई कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन खान योग्य हुन्छ । त्यसलाई हरियो चिह्नले संकेत गरिन्छ ।
अर्को भनेको ३५ भन्दा माथि र ४५ भन्दा कम मात्रामा भएको विषादीको प्रयोग भएको छ भने त्यस्ताखालका तरकारीलाई केहि दिन राखेर अलि गलाएर ओइलाएर खानु पर्ने हुन्छ तत्काल किनेर ल्याउने वित्तिकै खानु हुदैन त्यसलाई पहेलो चिह्नको प्रयोग गरिन्छ । भनेअर्को महत्व्पूर्ण भनेको ४५ भन्दा माथिको क्याटोगोरिमा रहेको विषादीको प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्ताखालका तरकारीले भने मानिसको स्वास्थयलाई नकारात्मक असर गर्दछ । त्यो भनेको खान अयोग्य हो । त्यसलाई रातो चिन्हले संकेत गरिन्छ । यसरी किसानहरुले तरकारीमा प्रयोग गर्ने विषादीको मात्र कति प्रयोग भएको छ त्यो हेर्न जरुरी हुन्छ ।
तपाईले भन्नु भए जस्तै कुन तरकारीमा कतिमात्रामा विषादीको प्रयोग भइरहेको छ भनेर एउटा उपभोत्ताले कसरी थाहापाउने त?
अहिले उठेको मुख्य विषय नै यहि हो आम उपभोत्ताले विषादी कसरी थाहापाउने भनेर। हामी उपभोत्ताले सधै कालीमाटीमा गएर तरकारी परिक्षण गरेर मात्र खान सक्ने अवस्था छैन साध्य पनि लाग्दैन। त्यसका लागि गर्नेको भनेकोे राज्यले गर्ने निती र अनुगमनै हो। सरकारले विशेष अनुगमन र ल्यावको प्रयोग गरी आममानिसलाई निश्चित मात्रामा विषादी नभएको तरकारीको खान सक्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ।
जुन भर्खरै निकै विवाद पछि बन्द भायो यदि नाकामै विषादीको परिक्षण गर्ने हो कम्तिमा आयाति तरकारीमा विषादी कम खान पाइन्थ्यो नि तर भलै त्यो अहिलेलाई सम्भावन रहेन त्यो हुन आवश्यक छ ।
अब नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीको कुरा गरौं। हाम्रो नेपालमा भारतमा जस्तो तरकारीको विषादीको प्रयोग नेपालको उत्पादनमा हुर्दैन। नेपालमा प्रति हेक्टर ३८ ग्राम बराबर विषादीको प्रयोग हुन्छ। जुन अन्य देशको तुलनामा त कमै हो। कोरियामा जापानमा प्रतिहेक्टर केजी बरारबर विषादीको प्रयोग गरिन्छ, यो भन्दैमा ती विकासित देश सँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौैं। हामी भन्दा निकै स्वस्थ्य छन्।
अब मुख्य कुरा भनेको उपभोत्ताले किनेको तरकारीमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको निकै प्रेस ताज तरकारी हेर्दै राम्रो तरकारीमा विषादीको सम्भावना अलि बढी हुन्छ । त्यस्ता तरकारीको कम प्रयोग गर्ने तरकारीलाई ल्याएको दुई वा तीन दिन पछि मात्र खाने, कागतीपानी वा पानीमा डुवाएर उपभोत्ताले किनेर ल्याएदेखि पकाएर कसरी खाइरहेको छ भन्ने कुरा सँग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । विषादीबाट उपभोत्ता आफैले सचेत भएर तरकारीको प्रयोग गर्ने हो।
तपाई को विचारमा नेपालमा विषादीको परिक्षण गर्ने प्रयाप्त मात्रामा उपकरणहरु नभएर पनि हामी विषादी भएको तरकारी खान वाध्य भएका हौं?
पक्कैपनि हो । नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा उपकरणहरु छैनन् कम्तीमा २९ वटा उपकरणहरु हुनुपर्छ तर नेपालमा एकदैमै सिमितमात्रामा उपकरणहरु रहेका छन् ।कतिपय तरकारीहरुको विषादीनै परिक्षण नै हुदैन जुन हामीले गरेको अपेक्षा अनुसारको नतिजा नै आउदैन।
पछिल्लो २०७५ / ०७६ को तथ्याङक हेर्ने हो भने भारतबाट आएका तरकारीमा कुनैमा पनि विषादी देखिएको छैन जुन नेपालको तरकारीमा भने २ वटा देखिएको छ अब कसरी विश्वास गर्ने भारतबाट आएका तरकारीमा विषादी नै पाइन्न भनेर । अब विषादी छैन भनेर ढुक्क भएर खाने ? त्यो अवस्था पनि छैन । कालीमाटी तरकारी बजार विषादी केन्द्रकै भरमा हामी भरपर्ने त ।
विषादीको प्रयोगको हिसाबले नेपाल भन्दा भारत अगाडी रहेको छ। भारतमा प्रयोग गर्ने विषादी र नेपालमा प्रयोग गर्ने विषादीमा कुन बढी हानिकार रहन्छन्?
उत्पादनको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादन नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै विषादीको प्रयोग हुन्छ। अब विषादीको प्रयोगको मात्र भने लगभग उस्तै हो जुन महिलै यस अघिनै भनि सके हरियो पहेलो र रातोको आधार । लामो समय राख्नका लागि अन्य देशमा निर्यात गर्नका लागि भएपनि भारतमा नेपालको भन्दा अलि बढी विषादीको प्रयोग भएको छ । केहि हद सम्म मान्नै पर्छ।
आज भोली अग्र्यानिक तरकारी बजारका पसलहरु धेरै पाइन्छ खासमा त्यस्ताखालका तरकारीमा विषादीको प्रयोग गरिएको हुदैन भनेर के आधारले थाहापाउने ?
हो । आज भोलीको अग्र्यानिक पसलहरु धेरै छन् म आफै पनि सन्तुष्ट छैन अहिलेको अग्र्यानिक पसलहरुबाट । किनभने रायासानिक मलहरुको प्रयोग गरिएको धेरै हुन्छनन् वास्तवमा अग्र्यानिक तरकारी भनेको के हो ? त्यो बुझ्न आवश्यक छ अग्र्यानिक भन्दै कालीमाटी तरकारी बजार बाट ल्याएर बेचेको धेरै उदाहरणहरु छन् ।अहिलेको तरकारी प्रारङरिक मलमा मात्र उत्पादन गर्न सम्भावना कमै छ । तर केहि हद सम्म अग्र्यानिक राम्रै हो तर म सतप्रतिशत विश्वास गर्दिन।
अन्तिममा के भन्न चाहानुहुन्छ विषादी तरकारीको बारेमा र आम उपभोत्तालाई?
पहिला म उपभोत्ताहरु के भन्न चाहान्छु भने हामी सबैले विषादी परीक्षण गरेर खान सक्ने अवस्था छैन त्यसैले हामी आफैले तरकारी बजार देखि भान्सामा पकाएको अवस्था सम्ममा ख्याल गर्ने हो भने धेरै मात्रामा विषादी नभएको तरकारी खान सकिन्छ। हामी आफैले यसलाई घरेलु प्रविधिद्धरा प्रयोग गर्न सक्छौं । अर्को भनेको अहिले सरकारले जुन निर्णय लिएको त्यो पून सूचारु गर्नुपर्छ नाकामा उपकरणहरु जडान गरी नाकामै तरकारी परिक्षण गर्ने हो भने हामी धेरै कम विषादी खान सक्छौं।